गृहमन्त्री बादलाका भाइ नरेश थापा पक्राउ, कारण सुनेर सबै चकित — Sanchar Kendra
गृहमन्त्री बादलाका भाइ नरेश थापा पक्राउ, कारण सुनेर सबै चकित
काठमाडौं । दुई वर्षअघि राजधानीमा भएको एउटा ह’त्या’का’ण्डका मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर फि’रौती संकलनमा सक्रिय रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका साइँला भाइ हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको २०७४ असोज २३ गते घरबाट कार्यालय जाँदै गर्दा शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गो’ली प्रहार गरी ह’त्या गरिएको थियो । उक्त हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतलाई तीन महिनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भारतबाट पक्रेर ल्याएको थियो । यिनै समीरसँग नरेशको सम्पर्क जोडिएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा जनकराक सापकोटाले समाचार लेखेका छन् ।
कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका अधिकांश उच्च अधिकारीहरूले नरेश पक्राउको पुष्टि गरे तर त्यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त नरेशको घटनामा कुन तहसम्मको संलग्नता हो र उनले फिरौती रकम ‘डिल’ गरेका हुन् कि हैनन् भन्नेबारे सीआईबीले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । गृहमन्त्रीकै भाइ पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक हुँदा ‘अप्ठ्यारो पर्ने’ भन्दै प्रहरीले यस मामिलालाई अति गोप्य राख्न चाहेको छ । स्रोतका अनुसार करिब एक साताअघि ब्युरोले अनुसन्धानका लागि भन्दै नरेश थापालाई महाराजगन्जस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको थियो ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मीले पक्राउ परेका पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई आपराधिक लाभ लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाउने गरी आइतबार मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल बुझाइएको बताए । घटनामा नरेशको संलग्नताबारेको प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई ठ्याक्कै यसबारेमा थाहा भएन । अर्को पिलरले गरेको अनुसन्धान हो ।’
सीआईबीमा अपराधको वर्गीकरण गरी त्यसको अनुसन्धानका निम्ति बनाइएका छुट्टाछुट्टै इकाईलाई ‘पिलर’ भन्ने गरिन्छ । जानकार स्रोतका अनुसार आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको मुद्दाको फाइलमा नरेशको नाम पनि समावेश छ । यसअघि निर्माण व्यवसायी गौचनको हत्यामा संलग्न समीरमान बस्नेतलाई पक्राउ गरेर ल्याएलगत्तै निजलाई ललितपुरको नक्खु कारागार पुर्‍याइएको थियो तर समीरले जेलभित्रैबाट आफ्नो सञ्जाल चलाएको सुचना पाएपछि २०७५ असोज १५ मा उनलाई मुस्ताङ कारागार सरुवा गरिएको थियो ।
दुवैलाई सुरुमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको थुनामा राखिएको थियो । सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर झन्डै १८ दिन महाराजगन्ज वृत्तको थुनामा राखिएका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै पछि मात्रै सीआईबी पुर्‍याइएको थियो । उनीहरू पक्राउ परेको सूचना पनि लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो ।
यसैबीच फिरौती संकलनको आरोपमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशसहित ८ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिहीबार बयान सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको फाइल आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
ब्युरोले निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याका मुख्य अभियुक्तका रूपमा केन्द्रीय कारागारमा रहेका समीरमान बस्नेतसँग मिली फिरौती संकलनको धन्दा चलाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरो स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकामा नरेशसहित स्युचाटारका पवन खड्का, इचंगुनारायणका सुरेन नगरकोटी, भेडासिंहका शैलेश प्रजापति, नागार्जुनका विनोद लामा, वीरबल भट्टराई, मनबहादुर पुनमगर छन् ।
वीरबल केन्द्रीय कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान हुन् । प्रजापति, लामा र भट्टराईको बयान बिहीबार सकिएको छ । सबैको बयान नसकिएकाले उनीहरू शुक्रबार र शनिबार हिरासतमै रहनेछन् । आइतबार पुनः बयान लिइने र त्यसपछि थुनछेक आदेश हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ । ब्युरोले समीरमानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
ब्युरोका डीआईजी नीरज शाहीले संगठित अपराध र आपराधिक लाभ लिएकामा सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस भएको बताए । प्रारम्भिक बयानपछि नरेशलाई बिरामी कागजातका आधारमा थुनाबाहिर बस्ने सुविधा दिइएकामा पछिल्लो समय उनी थुनामै छन् । ‘सातै जना ब्युरोको थुनाकक्षमै छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार वीरबलले समीरमानका निम्ति ‘सेटिङ’ मा मोबाइल फोन कारागारभित्र पुर्‍याउन सघाएका थिए । पक्राउ परेका एक जनाले ५ हजार रुपैयाँ दिने सर्तमा वीरबलले मोबाइल जेलभित्र पुर्‍याउन भूमिका खेलेको बयान दिएका छन् । समीरमानले सुरुमा पवन र सुरेनलाई उपयोग गर्दै झन्डै ८६ जना व्यापारी–व्यवसायीसँग फिरौती असुल्ने योजना बनाएका थिए ।
साउन अन्तिम साता पक्राउ परेका पवन र सुरेनले व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक, उद्योगी र व्यापारीलाई फोन गरेर रकम मागेको देखिन्छ । रकम असुल्न समीरमानकै अगुवाइमा पवन र दुबई रहेका जावेद अनवरदिनले योजना बनाएका थिए । उक्त योजनामा पछि शैलेश, वीरबल हुँदै गृहमन्त्रीका भाइ नरेश पनि जोडिएका हुन् ।
वीरबलले दिएको फोन प्रवेशले समीरमानलाई उपलब्ध गराएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । समीरमानले जेलभित्रैबाट फोन र एसएमएसमार्फत फिरौती धन्दा अघि बढाएका थिए तर उनले अधिकांश एसएमएस डिलिट गरेको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । ब्युरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा उक्त मोबाइल परीक्षण गरेर झन्डै ७० प्रतिशत म्यासेज ‘रिकभर’ गरेको थियो ।
गौचन हत्याको तीन महिनापछि भारतबाट पक्राउ परेका समीरमानलाई ललितपुरको नक्खु कारागार पुर्‍याइएको थियो तर जेलभित्रैबाटसञ्जाल चलाएको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयको पहलमा २०७५ असोज १५ मा उनलाई मुस्ताङ कारागार सारिएको थियो । त्यसलगत्तै उनकी श्रीमती माया शेरचनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतको आदेशमा उनलाई पुनः राजधानी ल्याएर केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिएको हो ।
समीरमानले शैलेश र पवनमार्फत नरेशसँग सम्पर्क बढाएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार रानीवन र सिटी सेन्टरमा बारम्बार भेट्ने गरेका पवन, शैलेश र नरेशबीच फोन सम्पर्क पनि बाक्लै भएको देखिन्छ । फिरौती असुली योजना र समीरमानलाई काठमाडौंबाहिरका जेलमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।
पवनले नरेशसँग भएको कुराकानी दुबईमा रहेका जावेदलाई फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत पठाएको अनुसन्धानमा खुलेपछि ब्युरोले सुरेनलाई बोलाएको थियो । एक अनुसन्धान अधिकारीले नरेशको संलग्नता तेस्रो पक्षका रूपमा मात्रै देखिएको बताए । फिरौती संकलनमा नरेशको नाम मुछिएकैले उनी पक्राउ परे पनि रकम लिएको वा भाग खोजेको भन्ने तथ्य अनुसन्धानमा खुलेको छैन ।
पवनले नरेशसँग भएको कुराकानी भन्दै जावेदलाई पठाएको सन्देशमा फिरौती संकलनमा केही अप्ठ्यारो परे नरेशले मिलाउने उल्लेख छ । कामका क्रममा केही गाह्रोसाह्रो परे नरेशले प्रहरी र गृह प्रशासन सबैलाई मिलाउन सक्ने कुराकानी भएको देखिन्छ । पवनले जावेदसँग केही अप्ठ्यारो परे नरेशले मान्छे भगाउन पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
‘दुई पक्षबीचको कुराकानीमा नरेशको नाम बारम्बार उल्लेख भएको देखिएपछि उनी स्वतः अनुसन्धानमा तानिएका हुन्’ अरू कुरा समय क्रममा थप खुल्दै जाला ।’ ब्युरोले नरेशले केन्द्रीय कारागारमै पुगेर समीरमानलाई भेटेको तथ्य बटुलेको छ । तर केन्द्रीय कारागारको आगन्तुक पुस्तिकाको सूचीमा भने नरेशको नाम देखिँदैन । यसबारे नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धानको गम्भीरताका कारण यो तथ्य पछि आफैं खुल्नेछ ।’
को हुन् समीरमान ?
समीरमान सुरुमा बाफलमा कुखुरापालन गर्दागर्दै स–साना ठेक्कापट्टामा लागेका थिए । त्यही क्रममा उनको चिनजान गुन्डा नाइके कुमार घैंटेसँग भएको थियो । घैंटेकै संगतबाट उनी अपराधको दुनियाँमा भिज्दै गए । गुन्डागर्दीमा दावा लामा, गणेश लामाहरूको उपस्थिति बलियो बन्दै जाँदा घैंटेले समीरमानलाई अगाडि सारेर धन्दा चलाइरहेका थिए ।
२०७२ भदौमा घैंटे प्रहरी कारबाहीमा मारिएपछि समीरमान आफ्नै समूह बनाएर फिरौती असुलीमा सक्रिय थिए । घैंटेको मृत्युपछि भारत पसेका उनले फिरौती धन्दा चलाइरहेका मनोज पुनसँग मिलेर आफ्नो समूह विस्तार गरेका थिए । यही समूहले २०७३ चैत २९ गते गौरीघाटमा दावा लामालाई गोली हानेको थियो ।
गोली हान्न समीरमानका मुख्य सहयोगी लोप्साङ लामाले नेपाली सेनाका भगौडा अमरबहादुर रानालाई प्रयोग गरेका थिए । प्रहरीले २०७३ पुस ४ मा भैरहवामा एमालेनिकट युवा संघ अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा पनि समीरमानको साथ रहेको बताएको छ ।
निर्माण व्यवसायी गौचनको हत्याका बेला उनले भारतका विभिन्न सहरमा बसेर भाइबर, ह्वाट्स एपमार्फत निर्माण व्यवसायी, बैंकका सीईओ र निजी स्कुल कलेजका सञ्चालकसँग असुली धन्दा चलाइरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि माधव नेपालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, प्रचण्डलाई के भने ?
विप्लवको प्रश्न- के भ्रष्टाचार, बलात्कार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु गल्ती हो ?
प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकबाटै किन बाहिरिए घनश्याम भुसाल ? यस्तो छ कारण
प्रतिबन्ध फुकुवापछि पहिलो पटक बोल्दै धर्मेन्द्र बास्तोलाले भने- देशको मुक्तिका लागि गोली खान तयार छौं
प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक पेरिसडाँडा सुरु
भिम रावललाई फर्काए प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कडा जवाफ
ओलीलाई प्रचण्डले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिए के हुन्छ ?